कोरोनाको दोश्रो लहर – के हो त नयाँ कोरोना ? नयाँ र पुरानोमा के फरक ? (भिडियोसहित) – Dailny NpNews
कोरोनाको दोश्रो लहर – के हो त नयाँ कोरोना ? नयाँ र पुरानोमा के फरक ? (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख ०४, २०७८ समय: १४:३४:०२
नेपालमा कोरोना संक्रमणको नयाँ चरण र नयाँ जटिलता सुरु भएको । विभिन्न देशमा देखिएको कोरोना महामारीको नयाँ भेरियन्ट्सले युवा तथा बालबालिकाहरूमा संक्रमणदर बढि छ । त्यसो त अहिले देखिएको भाइरस अलिक फरक भएको चिकित्सक बताउछन् ।
काठमाडौँ लगायत विभिन्न शहरमा कोरोना संक्रमण दोस्रो लहर बढ्न थालेको छ । अहिले देखिएको कोरोना भाइरस पहिले भन्दा बढी संक्रामक देखिएको विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएको छ ।
१० दिन यता सिकिस्त संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ । सिकिस्त संक्रमितमध्ये पनि यो महिना ५० वर्ष मुनिका बिरामी ५०% कै हाराहारीमा छन् । जुन अघिल्लो ३ महिनाको तुलनामा संख्यात्मक हिसावले दोब्बर जत्तिकै हो । कोरोना भाइरसको पछिल्लो संक्रमणको विशेषता हेर्दा नेपालमा पनि नयाँ प्रजातिको संक्रमण फैलिदै गएको हो ।
अहिले देखिएको कोरोनाको लक्षण पनि विगतका जस्तै रुघाखोकी निमोनिया हुनेर र थप थकाई महसुष हुने, हल्का ज्वरो र केही सामान्य स्वास्थ्य समस्या आएपनि निमोनिया हुनेहरूको संख्या बढी रहेको चिकित्सक बताउछन् ।
अहिले टेकु अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमित विरामीले बेडहरु भरिएका छन् । खुल्ला भारतीय सीमा हुँदै नेपालीहरु नेपाल प्रवेश बढेको र नयाँ प्रजातीको भाइरसले गर्दा धेरै संक्रमित देखिएको उनी बताउछन् ।
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । खुला सीमा भएकाले नेपालमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । बढ्दो संक्रमित संख्यालाई नियन्त्रण गर्न भारतको धेरै ठाउँमा लकडाउन समेत घोषणा गरिसकेको हुँदा त्यहाँ कार्यरत धेरै नेपाली नेपाल फर्कन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले हेलचक्र्याइ गर्याे भने नेपालमा कोरोना थप फैलन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।